Fifangarona mahafaty: Ny fomba fampiasan’ny governemanta ao MENA ny lalàna mikasika ny heloka an-tambajotra sy ireo rindrambaiko mpijirika mba hikendrena ireo mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 12:58 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, عربي, Español, Português, Italiano, Ελληνικά, English
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Khalid Ibrahim , tale mpanatanteraka ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Zon'Olombelona ao Gôlfa (GCHR), fikambanana mahaleo tena tsy mitady tombontsoa izay mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, ny fanaovana fikambanana ary ny fivoriana am-pilaminana any amin'ny faritry ny Gôlfa sy ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy.
Mety hiatrika ny fanamelohana ho faty atsy ho atsy ao Arabia Saodita i Israa Al-Ghomgham , ilay mpikatroka ho an'ny Zon'olombelona, noho ireo hetsika tsy nisy herisetra nataony mifandray amin'ny resaka zon'olombelona.
Mampiseho ny fomba nitarihan'ity fifangaroana fepetra ara-teknika sy ara-dalàna ity hankany amina vanim-potoana famoretana vaovao ny tatitra iray vao haingana nataon'ny Ivontoerana ao Gôlfa ho an'ny Zon'Olombelona (GCHR) izay mitondra ny lohateny hoe ”‘Fametrahana an-tsarintany ny lalàna momba ny heloka an-tambajotra sy ny fandikana ny lalàna niomerika ao amin'ny Gôlfa sy ny firenena manodidina”.
Nivarotra fitaovana fanaovana sivana tamin'ny fanjakana UAE mba hanakanana tranonkala, ka anisany ny GCHR, izay efa nosakanana tao amin'ny firenena hatramin'ny Janoary 2015, ny orinasa Kanadiana Netsweeper .
Lasibatry ny rindrambaiko mpijirika fantatra amin'ny anarana hoe Finfisher ary namidin'ny Gamma International izay orinasa ao UK sy Alemaina i Ahmed Mansoor, ilay blaogera Emiraty sady mpiaro ny zon'olombelona mamita ny saziny 10 taona an-tranomaizina ankehitriny noho ny fanehoany ny heviny an-tambajotra. Milaza ihany koa ireo fikarohana ara-teknika fa lasibatry ny rindrambaiko novokarin'ny orinasa Italiana, Hacking Team, i Mansoor.
Tamin'ny taona 2015 fotsiny, nampiasa ilay rindrambaikon'ny Hacking Team izay novidiany 634,500$ ny manampahefana ao amin'ny UAE mba hanarahana maso olona 1.100. Tamin'ny 2016, lasibatry ny ezaka fanapaingorana indray i Mansoor izay tamin'ity indray mitoraka ity, nampiasàny ny teknolojian'ny orinasa Israeliana NSO Group.